Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka Somaliya oo ka degtay Dhuusamareeb.
Wararka laga helayo caasimadda maamulka Galmudug ee dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaasi ay gaartay guddoomiyaha guddiga madaxabanaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimo Yareey.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya safarka ay ku tagtay magaalada Dhuusamareeb iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in ay halkaasi ay kulamo kula qaadan doonto madaxweynayaasha dowlad gobaleedyada oo ficil badan ka qaba arrimaha doorashooyinka dalka .
« Dowladda soomaaliya oo xirtay garoonka Beledweyne.
Maxkamada CQS oo xukun ku riday askari dil ka gaystay Muqdisho. »